Eze Jizọs Ejiri Nwa Ịnyịnya Ibu Banye na Jeruselem | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 21:1-11, 14-17 MAK 11:1-11 LUK 19:29-44 JỌN 12:12-19
JIZỌS ABANYE NA JERUSELEM KA ONYE MMERI
JIZỌS EKWUO NA A GA-EBIBI JERUSELEM
N’echi ya bụ́ Sọnde, abalị itoolu n’ọnwa Naịsan, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya hapụrụ Betani gawa Jeruselem. Ka ha na-erute Betfeji, n’Ugwu Oliv, Jizọs gwara mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya, sị:
“Gaanụ n’obodo nta ahụ unu na-ahụ, ozugbo ahụ, unu ga-ahụ ịnyịnya ibu e liwere eliwe, na nwa ịnyịnya ibu ya na ya nọ; tọpụnụ ha, kpụtara m ha. Ọ bụrụ na onye ọ bụla agwa unu ihe ọ bụla, sịnụ ya, ‘Ha dị Onyenwe anyị mkpa.’ Mgbe ahụ, ọ ga-ahapụ ha ka unu kpụrụ ha.”—Matiu 21:2, 3.
Ndị na-eso ụzọ ya amaghị na ihe a ọ sị ha mee nwere otú o si gbasa amụma e buru na Baịbụl. Ma mgbe e mechara, ha ghọtara na o mezuru ihe Zekaraya buru n’amụma. Zekaraya kwuru na Eze Chineke kwere ná nkwa “dị umeala n’obi, ọ nọkwa n’elu ịnyịnya ibu, ọbụna anụmanụ tojuru etoju, bụ́ nwa nke nne ịnyịnya ibu.”—Zekaraya 9:9.
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs rutere Betfeji, kpụta nwa ịnyịnya ibu ahụ na nne ya, ndị nọ nso ebe ahụ jụwara ha, sị: “Gịnị mere unu ji na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ?” (Mak 11:5) Mgbe ndị na-eso ụzọ ahụ gwara ha na ọ dị Onyenwe ha mkpa, ha hapụrụ ha. Ndị na-eso ụzọ ahụ wụkwasịrị uwe elu ha n’elu nne ịnyịnya ibu ahụ na nwa ya, Jizọs anọkwasịzie n’elu nwa ịnyịnya ibu ahụ.
Ọtụtụ ndị nọ na-agbakọta ka Jizọs nọ n’elu nwa ịnyịnya ibu ahụ na-aga Jeruselem. Ọtụtụ ndị nọkwa na-agbasa uwe elu ha n’okporo ụzọ, ndị ọzọ “si n’ọhịa gbute alaka osisi” ma gbasaa ha. Ha nọkwa na-eti mkpu, sị: “Biko, zọpụta ya! Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ nke na-abịa n’aha Jehova bụ! Ihe a gọziri agọzi ka alaeze na-abịa abịa nke nna anyị Devid bụ!” (Mak 11:8-10) Ihe a ndị a na-ekwu na-ewe ndị Farisii nọ ebe ahụ iwe. Ha gwara Jizọs, sị: “Onye Ozizi, baara ndị na-eso ụzọ gị mba.” Ma, Jizọs zara ha, sị: “Ana m asị unu, Ọ bụrụ na ndị a agbachi nkịtị, nkume ga-eti mkpu.”—Luk 19:39, 40.
Ka Jizọs hụrụ Jeruselem, o bidoro bewe ákwá ma sị: “A sị na gị onwe gị ghọtara n’ụbọchị taa ihe ndị ga-eweta udo—ma ugbu a, e zowo ha ka anya gị ghara ịhụ ha.” Jeruselem ga-akwụ ụgwọ ihe ọjọọ niile o mere. Jizọs kwuru, sị: “Ndị iro gị ga-eji osisi pịrị ọnụ wuo ogige gburugburu gị, ha ga-agbakwa gị gburugburu ma si n’akụkụ niile na-enye gị nsogbu. Ha ga-akụtu gị na ụmụ gị bụ́ ndị nọ n’ime gị n’ala, ha agaghịkwa ahapụ otu nkume n’elu nkume ibe ya n’ime gị.” (Luk 19:42-44) Ihe a Jizọs kwuru mezuru. E bibiri Jeruselem n’afọ 70.
Mgbe Jizọs banyere n’ime Jeruselem, “obodo ahụ dum malitere ịgba aghara, ha ana-asị: ‘Ònye bụ onye a?’” Ma, ìgwè mmadụ ahụ só Jizọs nọ na-asị: “Onye a bụ Jizọs onye amụma, onye Nazaret nke Galili!” (Matiu 21:10, 11) Ụfọdụ n’ime ìgwè mmadụ ahụ, ndị hụrụ mgbe Jizọs kpọlitere Lazarọs, gwawara ndị ọzọ banyere ya. Ọ na-ewute ndị Farisii na mbọ ha na-agba ime ka ìgwè mmadụ a kwụsị ito Jizọs na-akụ afọ n’ala. Ha gwawara ibe ha, sị: “Ụwa dum esorola ya.”—Jọn 12:18, 19.
Jizọs gawara n’ụlọ nsọ ịga zie ihe otú ọ na-eme mgbe ọ bụla ọ bịara Jeruselem. Mgbe o ruru ebe ahụ, ọ gwọrọ ndị ìsì na ndị ngwọrọ. Iwe bịara ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ n’ihi ihe ndị a Jizọs na-eme nakwa n’ihi na ụmụ okoro nọ na-asị ya, “Biko, zọpụta Nwa Devid!” Ha jụrụ Jizọs, sị: “Ị̀ na-anụ ihe ndị a na-ekwu?” Jizọs zara ha, sị: “Ọ̀ bụ na unu agụtụbeghị ihe e dere, sị, ‘I mewo ka otuto si n’ọnụ ụmụ ọhụrụ na ụmụ na-aṅụ ara pụta’?”—Matiu 21:15, 16.
Jizọs legharịziri anya n’ụlọ nsọ ahụ. Ebe ọ bụ na oge agaala, ya na ndịozi ya pụwara. Tupu abalị iri n’ọnwa Naịsan, ọ laghachiri Betani ma nọọ ebe ahụ n’abalị Sọnde.
Olee mgbe Jizọs banyere Jeruselem, oleekwa otú o si banye na ya dị ka Eze?
Gịnị ka Jizọs mere mgbe ọ hụrụ Jeruselem, oleekwa amụma o buru banyere ya?
Gịnị mere mgbe Jizọs banyere n’ụlọ nsọ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Eze Jizọs Ejiri Nwa Ịnyịnya Ibu Banye na Jeruselem
jy isi 102 p. 238-239